🥇 ▷ Iibinta taleefannada 5G ayaa ka badan 200 milyan sannadka 2020 ✅
Iibinta taleefannada 5G ayaa ka badan 200 milyan sannadka 2020
Waqtigan xaadirka ah waxaan ka iibsan karnaa xulashada 5G taleefanno gudaha Spain iyo suuqyo badan oo Yurub ah. Intaa waxaa sii dheer, bilahaan ugu dambeeya ee sanadka waxaan filan karnaa taas Moodooyinka cusub ayaa la imaan doona isku xirnaantan si ay suuqa, OnePlus waa mid ka mid ah magacyada mar hore u xaqiijiyay. Maxaa u maleynaya in taleefan noocan oo kale ah ay leeyihiin waqti kasta oo iib weyn.
In kasta oo ay noqon doonto sannadka 2020 marka Si cad u ballaariso xulashada taleefanka 5G ee suuqa. Tan iyo noocyo badan oo ka mid ah Android ayaa naga tagaya sanadka soo socda taleefannadooda la socon kara. Tani waxay sidoo kale ka muuqan doontaa iibkeeda adduunka oo dhan, sida ay falanqeeyayaal dhowr ah ku qiyaaseen.
Xogta cusub ayaa xaqiijineysa in sanadka 2020 in kabadan 200 milyan oo taleefan oo leh 5G ayaa la iibin doonaa adduunka oo dhan. Marka waa iska cadahay in taleefannada noocan ahi ay ku kacayaan farqi muhiim u ah suuqa. Intaa waxaa sii dheer, tirooyinkani waxay ka dhigan yihiin koror muhiim ah marka la barbar dhigo qiyaasaadkii hore.
Bilo kahor waxaa la qiyaasayaa in iibiyadan ay dhaafi doonaan 100 milyan. Marka waxaa jira rajo wanaagsan oo ka dhexeysa falanqeeyayaasha. Iyada oo iibiyayaashani ay inta badan diirada saari doonaan suuqyada qaarkood, sida Shiinaha ama Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo hadda wadida iibiyadan.
Arrinta Yurub, Telefoonada 5G waxay heli doonaan sanadka 2020. In kasta oo ay kuxirantahay wadanka hadana ma noqon doonto ilaa 2020 ama 2021 marka runti waxaan u soconaa inaan aragno koror ku yimid iibka ama in taleefannadu ku yimaadaan qaab guud oo iswaafaqsan. Markaa waxaa jira meel loogu talagalay koritaanka meeshan.
Sidaa darteed, waa inaan sugno inaan aragno haddii taleefannada 5G ay runtii la kulmayaan saadaashan. Waxay inta badan ku xirnaan doontaa xawaaraha ay wadamadu diyaarin karaan shabakadooda in la isticmaalo Maaddaama tani ay tahay wax si cad u xoojin doonta iibinta taleefannada iswaafaqsan.